Kooxda Barcelona iyo Luis Suarez oo la soo sheegayo inay heshiis wada gaareen… (Miyuu baxayaa xiddiga reer Uruguay?) – Gool FM
Haaruun September 21, 2020
(Barcelona) 21 Sebt 2020. Koooxda kubadda cagta Barcelona iyo Luis Suarez ayaa la soo sheegayaa inay heshiis ka gaareeen waxa laga yeelayo mustaqbalka laacibkan.
Warsidaha RAC1 ayaa warinaya in Barcelona iyo Luis Suarez ay ku heshiiyeen in la joojiyo heshiiska xiddigan reer Uruguay.
Suarez ayaa sida warbixinta lagu sheegay waxa uu ka tanaasulay oo ka tagi doona mushaarkiisa uga haray sanadka inta ka harsan, wuxuuna awoodi doonaa inuu ka tago kooxda si bilaash ah oo uu go’aansado mustaqbalkiisa.
Kooxda loo badinayo inuu ku biiri doono waa Atletico Madrid taasoo xafiiltan uu kala dhexeeyo Barcelona, taasina waxa ay u wanaagsan tahay Juventus oo dhankeeda doonaysa inay dib ula soo saxiixato weeraryahanka reer Spain ee Alvaro Morata.
Tan iyo markii uu uu ku soo biiray Kooxda Barcelona Luis Suarez, waxa uu dhaliyey 198, waxaana uu noqday ciyaaryahanka saddexaad ee ugu goolasha badan kooxda.
Waxa uu kula guuleystay Suarez kooxda Barca 13 koob oo ay ku jiraan saddexleeydii koobab ee ay hanteen sanadkii 2015-kii, iyadoo ay xusid mudan tahay in 40 gool uu ku qaaday gooldhalinta kabta dahabka ah ee Golden Shoe sanadkii 2016.